एसएलसीको मार्कसिटमा कति अंक आयो थाहा पाउने सुत्रसहित
काठमाडौं । यसपालीको एसएलसी परीक्षाको नतिजा ग्रेड प्रणालीबाट सार्बजनिक भएको छ । यसअघि पास, फेल सहित विद्यार्थीले कुन विषयमा कति अंक ल्याए भन्ने थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तर, यस पटक ग्रेड..
​एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नतिजासहित
काठमाडौं । यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार दिउँसो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। पनिकाले यस वर्षदेखि पहिलोपटक एसएलसी परीक्षाको नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक गरेको हो। ग्रेडिङ..
आज सार्वजनिक हुने एसएलसी परिक्षाको नतिजा कसरी थाहा पाउने ? यसरी हेर्नुहोस (विवरणसहित)
काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षाको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण काप्रिका अनुसार नतिजा प्रकाशनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । बिहीबार दिउँसो दुई..
बिबिएसको परीक्षाफल प्रकाशित, आठ परीक्षार्थी कारबाहीमा, त्रिविबाटै निष्काशन
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७२ मा सञ्चालित व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ चारवर्षे स्नातक तह (बिबिएस) प्रथम वर्षको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको छ। असोज तथा मंसिर र पुसमा सञ्चालित सो..
काठमाडौँ । शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई दिने सुविधासम्बन्धी विधि तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ । शनिबार संसद्ले पारित गरेको तर प्रमाणीकरण भइनसकेको..
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक..
कलिलो उमेरमै गर्भपतन गराउने बढे
काठमाडौं । रुपन्दैही जिल्लामा गर्भपतन गराउने किशोरी तथा युवतीहरुको संख्या बढी देखिएको छ । गर्भपतन गराउने अधिकांश कलिला उमेरका किशोरी तथा युवती रहेको पाइएको आजको गोरखापत्रमा समाचार छ । गर्भपतन गराउने..
एसएलसी परीक्षा हट्यो, १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक पारित
काठमाडौं । सहकारी संस्थाले स्कुल चलाउन नपाउने भएका छन् । साथै अस्थायी शिक्षकहरुलाई ‘गोल्डेन हृयाण्डसेक’ लिएर अवकासमा जाने बाटो खुलेको छ । व्यवस्थापिका संसदले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पास..
पूर्व शिक्षा अधिकारीले घरबाटै शिक्षक नियुक्त र सरुवा गरेपछि.............
प्रकाश सिलवाल जनकपुर। ‘शिक्षक हुँ’ भन्दै आफैँले नियुक्तिपत्र बोकेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धाएका आधारमा राज्य कोषबाट तलब दिन मिल्छ रु शैक्षिक अनियमितताका अनेक उदाहरण भेटिने धनुषामा यस्तै भएको छ । नियुक्तिपत्र देखाउँदै..
​अस्ट्रेलियाद्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा नेपालमा, इन्र्टनसिप अष्टेलियामा
काठमाडौ । यसै शैक्षिकसत्रदेखि नेपालमा अस्ट्रेलियाद्वारा मान्यताप्राप्त कुलिनरी एकेडेमी (कलेज) सञ्चालनमा आउने भएको छ । करिब दुई दशकदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका गैरनेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष गणेश केसीले राजधानीको मैतीदेवीमा ‘प्यासिफिक हस्पिटालिटी..
काठमाडौं । लामो छलफल र बहस पश्चात असहमतिका वावजुद शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज..
​४ बर्षदेखि भर्ना नलिएको त्रिविले रामपुर क्याम्पसमा यस बर्ष भर्ना लिने
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको दबाबका कारण चार वर्षअघि देखि रामपुरमा भर्ना रोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस वर्ष पुनः कृषि विषयको भर्ना लिने भएको छ । कृषिको महत्व बढिरहेका बेला..
काठमाडौं । ललितपुरको युलेन्स र रातोबंगला स्कुलले कक्षा १ मा मासिक शिक्षण शुल्क महँगो लिने गरेको पाइएको छ । युलेन्सले कक्षा १ मा २८ हजार र रातो बंगलाले मासिक २५..
​भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने, नियम विपरीतका चिकित्सालयको दर्ता खारेज हुने
काठमाडौँ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका आयुर्वेद चिकित्सालयको दर्ता खारेज गरिने छ । आयुर्वेद विभागमा दर्ता नभएका, जथाभावी विज्ञापन गरी भ्रम सिर्जना गरेका र पूर्वाधार नभएका उपचार केन्द्रलाई..
अच्युत रेग्मी काठमाडौ। नेपालमा हाल सात सय प्रजातिका जडीबुटी औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । वनस्पति विभागले सात हजार किसिमका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये सात सय प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी औषधिका रुपमा..
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीको असर बिर्सँदै सवा छ लाख परीक्षार्थी (एसएलसी)प्रवेशिका परीक्षामा सामेल भएका छन्। बिहान ८ बजेबाट देशभरका परीक्षा केन्द्रमा एकैसाथ सुरु भएको परीक्षा शान्तिपूर्ण सञ्चालन भइरहेको..
६ सय ११ मावि शिक्षकका लागि दरखास्त खुल्यो
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगको शनिवार बसेको बैठकले पाँचै विकास क्षेत्रका ६ सय ११ शिक्षक पदका लागि दरखास्त आब्हान गर्ने निर्णय गरेको हो । २०६३ बैशाख १० पछि रिक्त रहेका मावि..
काठमाडौं । तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा औषधी विक्री गरेको आरोपमा पक्राउमा परेका लोमस फर्मास्युटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका संचालकलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । पक्राउप्रति उद्योगी व्यवसायीको चर्को विरोध र दबाबपछि..
काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका जायज माग पूरा गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालय मातहतका आङ्गिक क्याम्पसका प्रमुख र क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्षले आज अध्यक्ष..
काठमाडौं । मानव जीवनको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोडिने औषधिमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा दुई कम्पनीमा प्रशासनले छापा हानेको छ । बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि बेचेर कालोबजारी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र..
​एसएलसीमा छ लाख विद्यार्थी सहभागी हुने
भक्तपुर । यस वर्षको प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी परीक्षाको तयारी पूरा भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले एसएलसी परीक्षाको तयारी पूरा भएको बताए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा..
​कर्मचारी संचय कोष र एनबीआईबीच सम्झौता
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषमा कार्यरत व्यवस्थापकीय तथा अन्य कर्मचारीमा ज्ञान र सीप बिकासका लागि नियमितरुपमा तालिम प्रदान गर्न कर्मचारी संचय कोष र नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई) बीच एक सहमति..
​सबै नेपाली साक्षर, शिक्षित र दक्ष बनाउने नीति आवश्यक’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली साक्षर, शिक्षित र दक्ष बनाउने गरी नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि सरोकार भएकाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको..
नारायण अधिकारी चितवन । नेपालमा दोस्रो ठूलो समस्याका रुपमा देखापरेको स्तनको क्यान्सर समयमै उपचार हुन सके निको हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । जसका लागि रोग पहिचान आफँैले गर्न सकिने भन्दै यहाँको..
​सरकारले आगामी बर्ष ३०० वटा बोडिङ्ग स्कुल खोल्ने तयारी
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कदो र विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको गुनासो बढेका बेला सरकारले ठूला र आवासीय विद्यालय स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने सो..
जाजरकोट । सल्यान कालागाउँ– ७ नेटामा रहेको श्री निम्न माध्यमिक विद्यालय चन्दाको भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । निजी स्रोतमा रहेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन गाउँमा चन्दा सङ्कलन गर्दै आइरहेको विद्यालयले..
​खाना पाकेपछि मात्र नुन हाल्न चिकित्सकको आग्रह
काठमाडौं । खाना पाकेपछि मात्र नुन हाल्न र दुई बालबालिका चिह्न भएको नुन मात्र प्रयोग गर्न चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । खाना पकाउँदा पकाउँदै नुन हाल्दा आयोडिनको मात्रा नष्ट हुने हुँदा..
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कास्कीको पुरनचौरमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयको आफ्नै क्याम्पसबाहेक आङ्गिक रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको यो पहिलो हो ।..
म्याग्दी । जिल्लाको रुम गाविस– ६ जेमका एक युवाले वैदेशिक रोजगारी त्यागेर सुरु गरेको चाउमिन उद्योगबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । दरबाङ बजारमा ‘आशिष एण्ड आशा’ उद्योग सञ्चालन गरेका..
जुम्ला । कर्णालीका ज्येष्ठ पत्रकार तथा संस्कृतिविद् रमानन्द आचार्य यस क्षेत्रमा बोलिने ‘खस’ भाषासँग सम्बन्धित शब्दकोष निर्माणमा लामो समयदेखि जुट्नुभएको छ । विसं १८४६ पूर्वको शक्तिशाली ‘खस’ राज्यको पहिचान बिलय हुन..
Results 222: You are at page5of 8